Kumuu ahaa Abwaan Sangub? – Puntland Post
Posted on June 18, 2019 June 19, 2019 by Liban Yusuf
AUN: Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise (Sangub)
Sangub markii da’diisu shan jir ahayd ayuu bilaabay u hilowga fanka, wuxuuna ku soo caan baxay ciyaaraha dhaqanka, gaar ahaan ciyaarta (Dhaantada), ka sokow dhinaca ciyaaraha dhaqanka, Sangub wuxuu ahaa Gabyaa ka hida qaba qoysas kala duwan oo wada gabya, aabihii, abtiyaashii iyo walaalihii intuba way gabyi jireen.
Sangub abtigii, wuxuu ahaa ninkii uu Timacadde ku hal qabsanayay ee uu lahaa; “Mudanihii Aflow iyo sidii Muxamed maw sheeg” Aflow, wuxuu ahaa, abtigii hooyadii la dhashay. “Masoolahayeey, Casoolahayeey, ciyaar-jinidaan aqaan”. Inkasta oo Sangub sheegay in aanu ilaa hadda garanayn macnaha ererada Masoole iyo Casoole, haddana wuxuu kelmadahaa ka dhigtay, hal-qabsi naaxyid u noqotay heeshihiisa.
Abwaan Sangub, sanadii 1961-dii isagoo barbaar ah ayuu tagay magaalada Hargaysa, wuxuuna imtixaan u galay idaacadda Hargaysa, sidaas ayuu ugu hawl galay Radio Hargaysa isagoo ugu shaqayn jiray si aan toos ahayn.
Isla sanadkaas 1961-dii ayuu Sangub u wareegay magaalada Muqdhisho, halkaas oo ay Radio Muqdisho imtixaan u galeen 21 qof oo uu isagu ku jiro, ayna ka soo baxeen laba qof, isaga oo gabayga loo qaatay iyo Sheekh qur’aanka akhriska loo qaatay, waxaana imtixaanka ka qaday, Cali Cilmi Afyare, Cismaan kaahin iyo Fiqi Buraale, Sidaas ayuuna shaqa toos ah uga bilaabay idaacadda Radio Muqdisho.
Sangub markii uu yimid magaalada Muqdihso waxaa yaab iyo dhabanahays ku noqotay sida gabdhaha magaalada ku nool ay u dhaqmaayaan, iyo sida ay ahaayeen gabdhihii uu miyiga ku yaqaanay, gabaygii ugu horeeyey ee uu ku galo imtixaanka waxa uu kaga hadlay sida dhaqanka magaalada iyo kan miyiga u kala duwan yahay, wuxuuna yiri.
“Habluhu waagii hore waa tii, ay hadal yaraayeene
“Waayagii harraadkiyo dhibtiyo, hawsha kululaaye”
“Waa kuwii lagu hawoon jirey intii, hadhac la ootaaye”
Abwaanku, wuxuu noqday mid halis ku ah samaynta riwaayadaha xiisaha leh, inta badana riwaayadihiisu waxay bulshada dhexdeeda ka abuureen doodo iska soo horjeedda, guud ahaan, riwaayadihiisu, waxay u qaybsan yihiin wadani, jacayl iyo kuwo falsafad ku dhisan. Riwaayadii ugu horaysay ee uu sameeyay, waxaa la odhan jiray “Naga Guur” waxayna ahayd, mid wadani ah oo uu ugu talo-galay gumaysigii Ingiriiska oo wakhtigaa Afrika inteeda badan xukumi jiray.
Abwaan Sangub wuxuu ahaa Abwaanka ugu rawaayadaha badan abwaanada Soomaaliada , waxaana kamid ahaa rawaayadihiisa.
La mood noqonse wayday
Jacaylkii xuudku liqay
Xorriyo nin gayaa ha guursado
Gari ma kaa baxdaa
Ummad wada qooqan baan wax u qaybi leeyahay
Ambiil ma leh
Halkii qoontu ku taallay dakharkii qali waa
Sanka bura ku taallay sidee baan ku yeelaa
Dhanka heesaha, kuwii caan baxay waxaa kamid ahaa.
Gaasiray ennaga yaayna kala guraya
Alla walalac beeney
Waan arkaayoo sheegi mayo
Wallee dheehoy, dhaaxaad olashaye, waa lagaa dhalin
Ninki dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa
Nin ku ray wax kuu sheeg”
Iyo kuwa kale oo badan.
AUN, Abwaan Sangub wuxuu ka mid ahaa abwaanada ugu horeeya hal-abuurka Soomaalida, waxaana uu kaalinta weyn ka qaatay kobcinta suugaanta Soomaaliyeed.
Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise, wuxuu dhowr jeer oo wareysi uu bixiyay ku sheegay in magaca Sangub aan la oran ee uu magacu yahay Singub, oo uu sheegay in wagii uu yaraa laga gubay sinta, balse Soomaalida ayaa u taaqaanay Sangub.
Abwaan Sangub wuxuu ku geeriyooday 77 jir, wuxuuna ka tagay 23 carruur ah iyo 2 xaas.